Global Voices teny Malagasy » Madagasikara: Fifidianana Hovidian’ny Firenena Lafo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Desambra 2018 7:38 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Madagasikara, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Na dia miaina anaty fahantrana lalina aza ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy, araka ny tantara dia efa isan'ireo fifidianana lafo indrindra isaky ny mponina ny fifidianana filoham-pirenena ao Madagasikara tamin'ity taona 2018 ity. Manana tombony ara-bola goavana ireo mpifanandrina roa lohalaharana tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany, dia i Andry Rajoelina sy i Marc Ravalomanana, raha oharina amin'ireo mpifaninana hafa. Tamin'ny vokatry ny fihodinana voalohany,  39,19% (1 949 851) no vato azon'i Andry Rajoelina ary 35,29% (1 755 855) kosa no azon'i Marc Ravalomanana, izay hifanandrina anatin'ireo adihevitra roa momba ny fifiianana filoham-pirenena mialoha ny fihodinana faharoa.
Tamin'ny 2013 i Hery Rajaonarimampianina, filoha voafidy tamin'izany, efa nandany 43 tapitrisa dolara  Amerikana (araka ny voalazan'ny RFI Afrique) izay mifanandrify amin'ny 21,3 dolara isaky ny mpifidy tamin'izany, avo roa heny tamin'ny vola lanin'i Trump tamin'ny 2016  mba hahalany azy ho filohan'i Etazonia. Ireo fandaniana ireo no vola tahiry lehibe indrindra teto amin'zao tontolo izao nivoaka tamin'ny mpifidy tsirairay ho anà firenena iray isan'ireo mahantra indrindra eran-tany. Mba hamahana io ampahany manan-danja loatra eo amin'ny lafiny ara-bola anatin'ireo fifidianana sy ny an'ireo famatsiam-bola tsy mazava io, nasain'ny Transparency International ireo mpifanandrina  hamoaka ampahibemaso ny loharanom-bolany sy ny tetibola ho ampiasainy alohan'ny fampielezankevitra sy mandritra ny fampielezankevitra.
Mpifaninana maro no nitaraina  ny amin'ny tsy fahafahana tena mifanandrina amin'ireo mpirotsaka hofidiana ireo, noho ny tsy fisian'ny fetra farany ambony amin'ny fandaniana ara-pifidianana. Voakiana ihany koa ireo fandaniana goavana natokana amin'ny fifidianana avy amin'ireo fampielezankevitra isan-karazany noho ny fahantrana lalina misy ao amin'ny firenena. Amin'izao ankatoky ny fifidianana izao, mahantra izay tsy izy ny vahoaka Malagasy: manodidina ny 92% no mivelona ambanin'ny 2 dolara isan'andro; 80% no matory noana na mangetaheta isaka alina. Ambonin'izay, zaza iray amin'ny roa no mararin'ny tsy fanjariantsakafo sy ny fahataran'ny fitomboana ary mahatalanjona ny fidinan'ny tahan'ny fampianarana (maherin'ny 600 000 ireo zaza tokony hianatra nefa tsy mianatra). Farany, efa rava be ireo fotodrafitrasa – làlana, tobim-pahasalamana, toeram-pitsaboana sy fianarana. Izany no mahatonga ireo mpanaramaso maro mihevitra fa mety ho tsara lavitra raha laniana amin'ny antony maika kokoa ny volan'ireo fampielezankevitra ireo. Izany koa no manazava ny antony maha ambany ny tahan'ny fandraisan'ny tanora anjara sy ny fahalinan'izy ireo amin'ity fampielezankevitra ity na dia latsaky ny 25 taona aza ny roa ampahatelon'ny mponina.
Isan'ireo antony lehibe mahatonga ny vahoaka tsy liana amin'ireo fifidianana ireo ihany koa ny kolikoly ao Madagasikara: laharana faha-155 amin'ireo firenena 175 nozahan'ny Corruption Watch i Madagasikara ankehitriny. Nitondra mankany amin'ny fangalarana ireo loharano voajanahary amin'ny ankapobeny sy ny fahasimban'ny tontolo iainana efa marefo ao Madagasikara ny tsy fisian'ny fanarahamaso ny fitondrana ataon'ireo birao nanomboka tamin'ny 2009. Nanamarika ny fanapahankevitra iray nataon'ny Parlemanta eoropeana tamin'ny 2017 fa «nisy tahirinà andramena goavana tsy ara-dalàna sy tsy voazava hita tao amin'ny lapan'ny filoha  taorian'ny fe-potoana nitondran'i Rajoelina tamin'ny 2013».
Tena manohitohina ny maha-ara-drariny ireo fifidianana ireo ny fitambaran'ny famatsiam-bola tsy mazava sy ny kolikoly. Manazava ny faritra ratrain'ny lasely ho an'ny hoavin'ny demokrasia  ao Madagasikara i Marcus Schneider, solotenan'ny Fondation Friedrich Ebert monina ao Madagasikara:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/12/131811/
 Tamin'ny vokatry ny fihodinana voalohany,: https://www.ceni-madagascar.mg/wp-content/uploads/2018/11/recapnationale0001.pdf
 43 tapitrisa dolara: http://www.rfi.fr/afrique/20131021-presidentielle-malgache-rajoelina-ravalomanana-robinson-rajaonarimpinina?fbclid=IwAR2KbryYebCZxzV9Ap0cmzfWZn78X41Nif9q9OFQzCciyGkqzKYyFVJMZmg
 avo roa heny tamin'ny vola lanin'i Trump tamin'ny 2016: http://www.rfi.fr/afrique/20180828-madagascar-hery-rajaonarimampianina-depenses-campagne-presidentielle-2013
 nasain'ny Transparency International ireo mpifanandrina: http://www.rfi.fr/afrique/20181012-presidentielle-madagascar-transparency-international-interpelle-candidats
 mahantra izay tsy izy ny vahoaka Malagasy: : https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2018-10-18-democracy-and-kleptocracy-vie-for-power-in-epic-madagascan-election/
 tahirinà andramena goavana tsy ara-dalàna sy tsy voazava hita tao amin'ny lapan'ny filoha: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0641&language=EN